Izidingo zeDyunivesithi yaseDalhousie | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla ze2022
Novemba 19, 2020 UAdaeze Nwachukwu
Izidingo zeDyunivesithi yaseDalhousie | Imirhumo, iScholarship, iiNkqubo, iZikhundla
Ngaba unomdla wokufunda kwiDalhousie University eCanada? Nantsi yonke into ekufuneka uyazi malunga nenqaba enkulu yokufunda; izicelo zabo kunye neefizi zokufunda, izifundi, iinkqubo zesidanga, imisebenzi yokufunda, iimfuno zokwamkelwa kunye nenkqubo, kunye nokunye okuninzi.
IYunivesithi yaseDalhousie, eCanada
Izikhundla zeYunivesithi yaseDalhousie
Inqanaba lokwamkelwa kweYunivesithi yaseDalhousie
Imirhumo yesicelo seDyunivesithi yaseDalhousie
IiFakhalthi zeDyunivesithi yaseDalhousie
Imirhumo yokufunda kwiDalhousie University
Ungasifaka kanjani isicelo sokwamkelwa kwiDyunivesithi yaseDalhousie
Iimfuneko zokungeniswa kwiYunivesithi yaseDalhousie
Izidingo zokungeniswa kwabafundi bamazwe ngamazwe
Izifundo zeDyunivesithi yaseDalhousie
IYunivesithi yaseDalhousie iYunivesithi yaBafundi beZizwe ngeZizwe
INKCUKACHA ZEMALI KWIMALI YAMANYE AMAZWE (uKevin Andrews) ISHLAWULI SE-INDIAN
URICHARD NO-MELDA MURRAY JAMAICAN ENGINEERING SCHOLARSHIP
IINGCACISO ZAMABHASO WOKUNGENA
IYunivesithi yaseDalhousie iAlumni eyaziwayo
IYunivesithi yaseDalhousie yenye yeyunivesithi yokuqala esekwe eCanada, esekwe nguGeorge Ramsay e1818 kwaye ikwiHalifa edlamkileyo, eNova Scotia Dallo.
Inye yamaziko aphakamileyo emfundo eCanada. Lilungu le-U15, (iqela leeyunivesithi ezinzulu zophando eCanada)
I-Dalhousie yonyusa ukufikelela kwayo ngomhla woku-1 ku-Epreli 1997 xa umthetho wephondo wawufuna ukudityaniswa neYunivesithi yobuGcisa yaseNova Scotia (iziko elikufutshane) nelathi lazisa; I-Faculty yobunjineli, i-Faculty of Agriculture kunye nokucwangcisa kunye ne-Faculty of Computer Science.
Umbono weDyunivesithi yayikukwenza inani elikhulu labafundi bezikolo eziphakamileyo bafumane ukufikelela ngakumbi kwimfundo ephezulu kwaye oko kwaye bekusafezekiswa ngoku.
IYunivesithi yaseDalhousie yamkela abafundi abavela kwihlabathi lonke njengoko iyaziwa kakhulu ngamaziko emfundo abekwe kakhulu kunye nomgangatho wemfundo.
Ngaphezulu kweeklabhu ezingama-400 kunye noluntu, uhlahlo-lwabiwo mali lwe-105 yezigidi zeedola, inqanaba lokunxibelelana kunye nophando lwezifundo luphakame kakhulu.
IYunivesithi yaqala izifundo zesidanga kwi-1866 kwaye iqhuba kakuhle ukusukela ngoko, ngoku ibonelela ngaphezulu kweenkqubo ze-480 kwizifundo ezingaphezu kwe-4000, amaziko ali-13, iinkqubo ezili-120 zesidanga sokuqala, inkqubo yokuthweswa izidanga eyi-180.
IYunivesithi yaseDalhousie iqhuba iikhampasi ezine, iSexton, iCarelton, iZifundo kunye neeKhampasi zezoLimo.
Inokuhlalisa abafundi abangama-2,600 malunga. Kwinkampu, kukho amagumbi angatshatanga naphindwe kabini.
IStudley Campus yeyona khampasi inkulu yeDalhousie University.
Ime kwiHalifax kwaye iqulethe uninzi lwezakhiwo ezibalulekileyo kunye nezixhobo zokufunda kwiHalifax yedolophu
Ikhampasi ithintelwe kuphela kubafundi abakwiFakhalthi yoBunjineli, kunye neFakhalthi yoYilo noCwangciso.
ICarleton Campus, ebekwe eHalifax, inamagunya oNyango kunye noGqirha bamazinyo.
I-Carleton campus isondele kwiziko lezeMpilo le-IWK kunye nezibhedlele ze-Queen Elizabeth II.
Ikhampasi yezoLimo ikufuphi neTruro, kwaye igcina iFakhalthi yezoLimo.
Ngenxa yemigangatho yemfundo ephezulu kunye nophando olunomdla, abafundi bezikolo eziphakamileyo kwihlabathi liphela banqwenela ukwamkelwa kwiDalhousie University. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ngokuhambelana nomsebenzi weziko, maninzi amathuba okufunda kwabafundi abasandula ukwamkelwa kunye nabaphumelele kwizidanga.
Imali yokufunda efikelelekayo ukusuka kwi-9,901 USD ukuya kwi-34,308 USD nayo iyinto efanelekileyo kubafundi abaninzi.
Iyunivesithi ibonelela ngeedigri ezili-147 zesidanga sokuqala kunye nediploma, iinkqubo zokuthweswa izidanga ezingama-84, kunye neenkqubo ezisixhenxe zobungcali.
Inamasebe amathathu e-MBA; I-MBA ekufundeni, kwiiNkonzo zezezimali, nakwiNdawo yokuhlala kwakhona.
Ezi MBAs zichithwe kwiinkqubo apho abafundi bengafundiswa kuphela ithiyori kodwa nezinto ezisebenzayo. Ukufunda nge-Intanethi kube luncedo kakhulu kwicandelo lezemfundo lesikolo.
Ngaphezulu kwabafundi abangama-2500 ababandakanyekayo kwiinkqubo zayo.
Kukwakhona (malunga nama-250) iiklabhu zokunxibelelana kunye nokuzonwabisa kwabafundi
Njengenye yamaziko aphezulu eCanada, iYunivesithi yaseDalhousie ibekwa kwinqanaba eliphezulu kungekuphela eCanada kodwa nakwihlabathi liphela.
UDalhousie ngenxa yokuba ekumgangatho ophezulu uqinisekisile ukuba ukuqeshwa kwabaphumeleleyo kubekwa kwizinga elivavanyayo amathemba engqesho kwabo baphumeleleyo.
2020 Uhlobo lwezemfundo lweeNyuvesi zehlabathi ubekwe kwiDyunivesithi yaseDalhousie 201-300 kwihlabathi liphela nakwi-10-12 eCanada.
The I-2021 QS yeHlabathi yeYunivesithi yeHlabathi ibekwe eyunivesithi i-291 emhlabeni kunye ne-12th eCanada.
kwi 2021, Iindaba zase-US kunye neNgxelo yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi, iyunivesithi ibekwa i-322nd kwihlabathi liphela, kunye ne-14 eCanada.
Kwinqanaba likazwelonke, Maclean Ubekwe kwiDalhousie 7th kwizikhundla zabo zaseyunivesithi zoGqirha ezingo-2021.
Kwi MaxeshaImfundo ePhakamileyo ye-2018 yokuqeshwa kwinqanaba lehlabathi, UDalhousie ubeke i-200-250 kwihlabathi liphela kwaye wabekwa kwindawo yesi-8 eCanada.
In I-QS ye-2019 yokufumana ingqesho kwinqanaba, iyunivesithi ibekwe kwi-301-500 kwihlabathi liphela, kunye ne-9-17 eCanada.
IYunivesithi ibalwa njenge-85th kunye ne-50th kuluhlu kunye nenqanaba leZikhundla zeMpembelelo. Impilo entle kunye nokuba sempilweni kweMfundo ePhakamileyo yamaXesha kwi2020.
Ekufumaneni ireyithingi yeenkwenkwezi ezi-5 zizonke ngeQS Stars, iyunivesithi ibalwe njengeyona yunivesithi ibalaseleyo yokufunda eCanada.
Ukuthathela ingqalelo igama leyunivesithi, inezinga elinzima lokumkela 43%, kwaye ke, ukwamkelwa kwiDyunivesithi yaseDalhousie asikokuqhula.
Amanqanaba aphakathi aphakathi abafundi abonyaka wokuqala yi-87.6% eyitemplate yento yokuba ukungena kule yunivesithi kungumsebenzi omkhulu kwaye abagqatswa kufuneka basebenze nzima kunakwinqanaba labo lokufunda langaphambili.
Ecaleni kwamaxwebhu aza kulayishwa esikolweni, kufuneka kuhlawulwe umrhumo ongabuyiswayo obizwa ngokuba sisicelo. Imirhumo yesicelo seDyunivesithi yaseDalhousie kuzo zonke iinkqubo kwaye bonke abafundi baqala ukusuka I-70 - 115 CAD.
I-Faculty yoYilo kunye noCwangciso
Ubugcisa bezoBugcisa kunye nezeNzululwazi
Ikholeji yokuqhubeka kwemfundo
YeFakhalthi yezifundo zokuthweswa izidanga
Icandelo leSayensi yezeMpilo
Imirhumo yokufunda kuzo zonke iikhosi ihlawulwa qho ngonyaka. Iindleko zokuhlala eCanada ziyahluka ngokweemfuno kunye neemfuno zabafundi.
Nangona kunjalo, abafundi bamanye amazwe kufuneka benze uphando malunga noqikelelo lwesixa semali abaya kuyibhatala ukuze bafunde kwiDalhousie University.
Apha ngezantsi kukho ukophuka kweendleko zabafundi abafundayo zombini izidanga kunye nezifundo zesidanga sokuqala
Imirhumo yokufunda kwiYunivesithi yaseDalhousie $ 4,000 - $ 9,000 okokugqibela.
Iincwadi: $ 200-60
I-inshurensi (yezempilo): $ 636
Indawo yokuhlala: $ 8,400
Izixhobo: $ 200-300
Ukutya: $ 3,000- $ 4,800
Imali yePin: $ 2,400- $ 4,000
Ezahlukeneyo: $ 2,500
Abafundi bamanye amazwe bahlawula ngaphezulu, (umrhumo owahlukileyo wamazwe ngamazwe) ongasondelanga kuwo $6,000 ngaphezulu kweeyure ezili-9 ezihlawulisiweyo.
KwiDyuvesi yaseDalhousie Intlawulo yokufunda ye-Master zigaba $ 9,000 - $ 18,000 ngonyaka.
yayo Imali yokufunda ye-PhD ikwahluka ukusuka $ 5,000 - $ 11,000 exhomekeke kwikhosi yokufunda.
Jonga uqikelelo lwemirhumo ngokweenkqubo zabafundi abenza isidanga kunye nabaphumeleleyo
Ukwamkelwa kwiDyunivesithi yaseDalhousie kuxhomekeke ngqo kubume. Abagqatswa abanomdla kufuneka bahlangabezane neziko kunye neemfuno zenkqubo njengoko kuchaziwe yiYunivesithi.
Abaphangi bangafaka isicelo sokwamkelwa kwiYunivesithi yaseDalhousie ngokundwendwela ukwamkelwa kwayo Portal
Abafundi bamanye amazwe kufuneka bangenise izicelo zabo kwi-Intanethi, ukuze bafumane ixesha kunye nolwazi olwaneleyo.
Wonke umgqatswa kulindeleke ukuba afake imali yesicelo (kuxhomekeke kukhetho lwenkqubo).
Njengeyunivesithi efunwa kakhulu, oku kulandelayo ngamaxwebhu ayimfuneko kunye nezinye iimfuno ekufuneka zilayishwe kwaye zibonelelwe abafake izicelo kuzwelonke :
Ukugqitywa kwesikolo samabanga aphakamileyo (iBakala 12)
Ubuncinane ubuncinci be-70% yomyinge kwizifundo ezintlanu zeBakala 12.
Ibanga lokugqibela le-70% kwiBanga le-12 lesingesi lesiNgesi (kunye naso nasiphi na esinye isifundo esifunekayo kwicandelo elisetyenzisiweyo).
Abafundi bamanye amazwe ulwimi lwabo lwesiNgesi olungelolokuqala kufuneka babonakalise ukuba banobuchule kuLwimi lwesiNgesi. Bamele bahlale kuvavanyo lobuchule bolwimi lwesiNgesi ekufuneka belufumene amanqaku athile ukucoca iimviwo.
Uvavanyo lobuchule bolwimi lunokungahoywa ukuba umfaki sicelo uphumelele ukufumana isidanga kwiyunivesithi eyaziwayo apho ulwimi lokufundisa sisiNgesi okanye kwilizwe apho isiNgesi yenye yeelwimi zesizwe.
Ubungqina kufuneka buqinisekiswe yiFakhalthi yeziFundo zeZidanga. Amanqaku okuvavanya asebenza iminyaka emi-2 ukusukela kumhla wokubhalwa kwawo. Iindidi zamanqaku ovavanyo amkelweyo nguDalhousie zezi:
I-TOEFL (iBT yezifundo) 92
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, esinye sezizathu zokuba iYunivesithi yaseDalhousie ifunwe kakhulu isiphumo semali yokufunda efikelelekayo, hayi kuphela, kukho amathuba amaninzi okufunda kwabafundi abangakwaziyo ukuhlawula iindleko ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye.
IYunivesithi ibonelela ngezifundo kubafundi bamanye amazwe nakwabafundi basekhaya. Aba bafundi bafumana izixa mali zokufunda ukusuka 380 USD ukuba 30, i-400 yeedola.
IIBHASARI: Banika imali encinci ukusukela 152 USD ukuba 456 USD.
IMALI-mbolekoIinketho zemboleko-mali ezifumanekayo ziyafumaneka kubafundi basekhaya nakwamanye amazwe ukubanceda ukuba bazenzele ngokwabo esikolweni.
UMGANGATHO WEKHREDITHI: Abafundi bafumana ukufikelela kwisixa ekuvunyelwene ngaso esinokuhambelana neemfuno zabo kunye neemfuno. Nangona kunjalo, abafundi kufuneka bahlawule benomdla.
Le mfundo inexabiso 15,000 USD, inikwa abafundi bezidanga bamanye amazwe abathathe i-Bachelor ye-Commerce program ababonisa inkuthalo kwizifundo zabo.
Isicelo senziwa ngesicelo seBhaso lokuNgena ngokuBanzi
Oku kuvulelekile kubafundi bamazwe aphesheya baseJamaican abafundela inkqubo yeBachelor yezoBunjineli, bomelele kwezemfundo kwaye bafuna uncedo lwezezimali. Inexabiso le- 22,000 CAD ukuba 88,000 CAD kwaye iyahlaziywa iminyaka emine.
Isicelo sidlula kwisicelo seBhaso lokuNgena ngokuBanzi.
Abafundi abafumana ama-80% avareji yokwamkelwa okanye abangama-26 baxela kwangaphambili ngamanqaku eDiploma. Ixabiso ngqo lokufunda alichazwanga, kodwa imali iyahluka kwaye isifundi senzelwa isicelo sokufakwa.
Ezi zezifundo ezahlukeneyo ngezixa ezahlukeneyo, iimpawu, imigaqo kunye neemeko kwaye ubukhulu becala ubukhulu becala bulawulwa yi-FGS.
Ukungeniswa kwale mali yokufunda kwenziwa ngeQonga leScholarship elikwi-Intanethi.
Bona ngakumbi izifundiswa kunye namabhaso ahloniphekileyo afumanekayo kwiDyunivesithi yaseDalhousie
UGeorge Laurence (ugqirha wenyukliya)
URonald St. John Macdonald (uprofesa wezomthetho kunye nengcali yezomthetho yamanye amazwe)
USir Graham Day (owayengusihlalo we-Cadbury Schweppes plc, Hydro One, kunye ne-CEO yeBritish Shipbuilders kunye neRover Group)
USir James Hamet Dunn (omkhulu wezemali waseCanada kunye nosomashishini)
UHugh MacLennan (umbhali kunye noprofesa)
U-HR Milner (igqwetha, usomashishini, kunye ne-Chancellor yangaphambili
IYunivesithi yaseKing's College)
UMoses Morgan (owayesakuba ngumongameli weSikhumbuzo seYunivesithi yaseNewfoundland)
UJoseph Phillip Kennedy (iJaji eyiNtloko ye
INkundla ePhakamileyo yeNova Scotia)
UCharles Peter McColough (CEO weXerox)
Hon. U-Edmund Leslie Newcombe (Ubulungisa beNkundla ePhakamileyo yaseKhanada)
UAlvin Shrier (uprofesa we-physiology kunye noSihlalo we-Hosmer kwi-Physiology kwiYunivesithi yaseMcGill)
UPurdy Crawford (umlawuli wequmrhu, owayesakuba yi-CEO ye-Imasco)
UFrank Manning Covert (igqwetha nosomashishini)
Lorne Clarke (owayesakuba yiJaji eyiNtloko ye
UDonald L. Clancy (owayesakuba nguMgwebi weThe
INkundla ePhakamileyo yaseBritish Columbia kunye nelungu leBhodi yoPhononongo yaseBritish Columbia)
U-Ian Hanomansing (intatheli ye-TV)
USean Durfy (B.Comm 1989) (uMongameli kunye ne-CEO yeWestJet)
UFred Fountain (igqwetha, usomashishini, ububele kunye nelungu le-Order yaseCanada)
Ingxelo yeMacNeil / yeLehrer kwi-PBS)
UMarjorie Willison (ubuntu bonomathotholo beCBC)
U-Andrew Kam (owayesakuba yi-CEO ye-Hong Kong Disneyland)
UConstance Glube (owayesakuba yiJaji eyiNtloko yeNova Scotia, owokuqala wabafazi kwiJaji eyiKhanada)
UCary Kaplan (umsunguli weCosmos Sports, umongameli / umphathi jikelele uBrampton Beast (ECHL) owayesakuba ngumongameli weHamilton Bulldogs)
Izitebhisi zikaDenis (injineli yaseCanada kunye nosomashishini)
UMaury Van Vliet (umongameli kunye ne-CEO ye-1978 ye-Commonwealth Games)
UMhlekazi uJoseph Andrew Chisholm (owayesakuba nguSodolophu weHalifax kunye neJaji eyiNtloko ye
UJohn Keiller MacKay (owayengumgwebi weNkundla ePhakamileyo yase-Ontario kunye
Ukusuka ekukhuthazeni uphando olunobunewunewu ukuya kwinqanaba lokumkeleka elincomekayo kunye nokuxhobisa abafundi bayo ngolwazi lokuqala kwiinkqubo ezahlukeneyo ezibonelelweyo, iDyunivesithi yaseDalhousie liziko elihle eliya kuthi lifezekise amaphupha akho ezifundo, kuxhomekeke kukhetho lwakho lwenkqubo.
Iyunivesithi inayo yonke into efunekayo ukuze uphumelele. Uya kuba namava amangalisayo kwikhampasi yaseDalhousie kwaye uza kudibana kunye nokunxibelelana nabantu abanengqondo ezikhethekileyo kwiiprojekthi zentsebenziswano.
Kule nqaku, siyathemba ukuba eli nqaku likwazile ukwenza uphando lwakho kwiDalhousie University. Ngethamsanqa isicelo sakho.
IYunivesithi yaseManitoba Iimfuneko
Iimfuneko zeYunivesithi yaseGuelph
Iimfuno zeYunivesithi yaseMontreal
Iimfuno zeYunivesithi yaseVictoria
Iimfuneko zeDyunivesithi yaseCalgary
Post Previous:Kutheni i-mini MBA hayi enye ikhosi yeshishini?
Okulandelayo Post:Iimfuno zeYunivesithi yaseRyerson | Imali, iiScholarships, iZikhundla, iiNkqubo
February 25, 2021 kwi 3: 05 pm
Ndonwabile ukubona le ndawo